Hevitra MPANOHARIANA | Toekarena | 7
Madauto: Bankirompitra angaha?
2008-02-15 @ 09:34 in Toekarena
Ny orinasa lazaiko eto dia tranombarotra goavana mivarotra fiarakodia izay manana ny foiben-toerany ao Ankorondrano. Gaga dia gaga aho raha nahita filazana tao amin'ny gazety 'le quotidien' omaly 14 febroary takelaka iray manontolo ny fanaovana lavanty hotontosaina ny alatsinainy 18 febroary 2008 ho avy izao ary hatomboka amin'ny 10 ora maraina izany.
Amidy atao lavanty noho ny fitorian'ny lehiben'ny resevera momba ny hetra izay misolo tena ny talen'ny fanarahamaso ny fandoavan-ketra sy ny fifanolanana mikasika izany manko ny fiara miisa 117 sy fiara mpitrongy tany (tracteur) an'io orinasa io. Fiara vaovao tokony amidy avokoa izy ireo ary saiky fiara fitondrana entana mahatanty lalandratsy (4x4) misy seza aloha sy aoriana avokoa (pick up double cabine).
Vaka ny saina no mieritreritra izao toe-javatra izao. Tsy mba fiara ampolony manko no resaka eto fa mihoatra ny zato. Inona ny fototry ny olana? Nanao fahadisoam-pilazana ve ny orinasa sa tsy zakan'ny orinasa intsony ny hetra takian'ny fanjakana? Mila fanadihadiana avy amin'ny mpanao gazety izao... ary enga anie mba hisy izany hipoiran'ny marina amin'ity zavatra tsy mbola reko loatra ny akony an-gazety ity. Ny fotoana ihany koa moa ny ahy dia sambosamborina hatramin'izao.
Fa resaka hafa dia hafa ho fahatsiarovana ny fetin'ny mpifankatia teo indray ity soratako eto ity. Naka rivotra kely aho afak'omaly hariva dia nandehandeha tamin'iny Tsaralalana iny tokony ho tamin'ny 5 ora sy sasany hariva teo (mbola hiverina hiasa soa aman-tsara avy eo). Nisy rangahy iray tokony ho anelanelan'ny 65 - 75 taona teo ho eo teo alohako nizotra soa aman-tsara. Nisy ramatoa anelanelan'ny taona 55 - 65 eo ho eo nifanena taminay fa notsongoin'ilay rangahy mafy ihany ny sandriny ho'aho. Taitra be ilay ramatoa ary nahateny hoe 'fa adala ve ianao rangahy ity a! efa antitra io mbola misary gaigy ihany?'. Izaho kosa latsaky ny hehy tsy misy tahaka izany nahita izany toe-javatra izany. Ilay rangahy koa moa tsy niherika mihitsy sady nitsiky vendrana izany rehefa nosongonako hatreny ampitandalana hijereko ny tavany. Loza koa anie ity fetin'ny mpifankatia ity fa mahalasa gaigy ny tanora sy ny antitra e!
Tokony hampahafantatra ny hetra sy haba aloany ny Tiko
2008-01-11 @ 07:14 in Toekarena
Eo anoloan'ny fisondrotan'ny hetra sy ny haba isankarazany dia mandeha dia mandeha ny fanontanian'ny mpiresaka an-dalambe, fa tsy amin'ny haino aman-jery hoe mba mandoa vola ve ny tiko sa orinasan'ny filoha dia tsy takian-ketra?
Mitsamboaboatra ihany ny olona raha vao ampifandraisana ny hetra aloan'ny olona ka iniana anotaniana hoe mba manao ahoana ny vondrona tiko? Koa raha sahy sy te-hampangarahara ny toe-java-misy manaporofo ny fitiavan-tanindrazany amin'ny fandoavan-ketra ny tiko dia tokony hanambara izany ampahibemaso sady hilaza ny vola naloany isan-taona indrindra hatramin'ny nitondran'ny filoham-pirenena.
Efa manahirana koa manko ny lahatsoratry ny vaovaontsika indraindray tahaka ny fanaovana lohateny hoe politikan'ny fitarainana. Dia manantena isika fa hampiseho ny fanatontosany ny adidiny ny orinasan'ny filoham-pirenena
Ka iza ary no hisolo ny Shoprite?
2008-01-09 @ 07:22 in Toekarena
Orinasam-barotra goaibe Afrikana Tatsimo ny Shoprite araka ny fahalalako azy. Izy no nisolo ny Champion izay tsy tamana teto Madagasikara intsony rehefa nifarana hatreo ny fitondran-dRatsiraka Didier. Raha izay tadidy izay no lazaina dia tokony ho tamin’ny taona 2003 teo ho eo no niditra ny tsena malagasy ity fivarotana goaibe ity.
Raha misy ny toerana tsara indrindra azony mahalaza tsara azy dia io eo Antaninarenina (Printemps, Prisunic, Champion ary farany Shoprite) io. Na dia lavitra akaiky azy aza manko ny eo Analakely anoloan’ny Lycée Rabearivelo dia azo lazaina fa samy manana ny mpanjifany izy roa ireo. Ho anareo mbola tsy mahalala ary dia nikatona io Shoprite eo Antaninarenina io nanomboka ity volana ity noho ny tsy nanavaozan’ny tompony intsony ny fanofana ny trano.
Azo lazaina fa tombombarotra misimisy ihany no very noho io fikatonana io ary hahazo tombony izay hahazo io toerana fantatra amin’ny mahatsenambarotra lehibe azy. Dia hibanjina any ny mason’ny mpanarabaovao liana hahafantatra haingana dia haingana izay nahazo ny tsena. Mbola ho tsenambarotra ihany ve sa hampiasaina zavatra hafa amin’izay? Aza hitako anie ka lasa mahagrrrr…aoka marina e !
Vola sandoka eee!
2008-01-07 @ 07:20 in Toekarena
Na dia tsy misy mpilaza loatra amin’ny haino aman-jery aza ny fisian’ny vola sandoka eto amin’ny firenena, tsy milaza izany fa tapitra hatreo ny amin’io. Hatramin’izao fotoana izao dia any ambanivohitra no tena malaza ielezan’ireny vola sandoka ireny. Mazava loatra fa raha tsy mahalala tsara ny vola dia mety ho voambaka, indrindra fa ireo mpivarotra omby any amin’ny tsenan’omby mazava loatra.
Tsy dia miakatra eto an-drenivohitra loatra kosa ireny vola sandoka ireny noho ny fahalalana avy hatrany ny mahasandoka azy angamba. Vantany vao aharenesam-peo ny fisiany manko eto Antananarivo dia vetivety dia azo ireo mitondra azy ary matetika rehefa misy tambajotra tratra dia misy Komoriana na Afrikana vitsivitsy hatrany ao anatin’ny tombajotra iray. Noho izay antony izay no mahatonga ny maro izay iresahako tsy mankasitraka loatra ny fahamaroan’izy ireo eto an-tanàna ary antony iray tsy nankasitrahana ny fidirana tamina tsena ekonomika roa avy hatrany (sadc sy comesa). Ny tombotsoan’ny filoha ihany no tena banjinina tamin’ny fidirana tamin’ireo vondrona ekonomika ireo, hoy ny hevitry ny tsy mpankasitraka sy/na tsy mahita tombotsoa loatra amin’ny fahamaroana Afrikana mandraharaha eto an-tanàna.
Izay no ela fa hampiseho anareo sarim-bola ambadika sy anoloana aho ka anjaranareo ny mamaly aloha hoe iza amin’ireo vola ireo no hitanareo fa vola sandoka? Samy sandoka avokoa ve izy roa sa samy tena vola avokoa? Sa ny vola ambony ihany no sandoka? Sa ny vola ambany ihany no sandoka? Hazavao ny hevitrao!
Ny valinteny marina amin’ireo fanontaniana rehetra ireo dia “TSIA” avokoa afa-tsy voalohany sy ny farany irery ihany. Ny voalohany tsy mety valiana eny na tsia fa mitady valiny hoe itsy, na iroa, na izy roroa, na samy tsy izy. Ary raha mamaly “eny” kosa ianao tamin’ny fanontaniana farany ka manana ny antony mazava dia nahita ny marina ianao.
Ny tsikaritry ny nahita ny mahasandoka ilay vola teo ambany voalohany dia ny soratra 2000 nitsonika. Io vola nitsonika io no manaitra ny saina satria tsy dia fahita tamin’ny vola taratasy loatra.
Rehefa hita iny nanaitra voalohany iny vao afaka jerena hoe toa somary mifotetaka kokoa ny loko na dia tsy mivandravandra aza izany. Ny vola tena izy moa hita ho maimaina izay ihany ny fijery azy.
Aoka anefa homarihina fa sary alaina ambanin’ny hazavan’ny masoandro ny sary nijerenao azy fa raha ny nandraisanay azy tanaty toerana somary malomaloka maizimaizina ihany dia tsy hahatsikaritra azy loatra ianao raha tsy efa nilazana mialoha. Maro tamin’izay niresahako moa ny niteny hoe raha any amin’ny fiara fitaterana iny no alefa tsy hisy hahatsikaritra akory. Ny fandrasaina ilay vola manko raha tsy efa mpikirakira azy tsy hahatsikaritra ny mahasamihafa azy amin’ny tena izy akory. Tsapa ihany fa somary matevina ilay vola sandoka nefa malefaka kokoa rehefa miara-raisina izy roa.
Rehefa izay vao mijery ny tsikaritra hafa ianao. Io fa mivandravandra mamirapiratra loatra ny tsiratsiraka fanavaham-bola (filament) amin’ilay vola sandoka nefa rehefa tarafina tsy ahitana soratra 2000 tahaka ny amin’ny vola tena izy.
Jereo kosa anefa fa vitan’ny manao vola sandoka amin’izao fotoana izao ny sariomby izay fiarovan’ny maroan’isa taloha.
Ny mampihomehy amin’ny sariombin’ny volasandoka fotsiny dia tsy marika 2000 araka ny sary amin’ny vola tena izy no hita fa 5000. Jereo tsara ny maritsoratra mitsangana miakatra eo ambany ankavian’ny sariomby. Misy ihany koa moa ny fiavahana madinidinika nefa noho ny hamaroan'ny sary hijerena ny lafy sy ny joro rehetra dia azonao jerena eto izany.
Eo vao lasa ny eritreritra hoe, tsy hanao dikantsary vola tsirairay ny manao vola sandoka fa mety hiverimberina ny laharana sahala amin’ity asehoko eto ambany ity
Fa rehefa nahita ity vola sandoka ity aho, ka miverina mieritreritra ny sarambamben’ny olona indray mamantatra ny vola sandoka amin’ny tena izy dia hoy aho hoe tsy mahagaga raha betsaka ny vola rovitra mandehandeha ain’izao fotoana izao. Tandrifin’ny tsiratsiraka hatrany manko no misy ny rovitra ka mahalasa ny fisainana hoe misy manao fanahy iniana mandrovitra ve sa eo no mora rovitra ny vola. Amiko manokana anefa dia tsy mitombina loatra ny valinteny faharoa farany io.